Is-qor Wargeysyada Teknolojiyada Suuqgeynta Sare ee Warshadaha! | Martech Zone
Is-qor Wargeysyada Teknolojiyada Suuqgeynta Sare ee Warshadaha!
Waxaa suuro galiyay Jetpack, Waxaan hadda haysanaa doorasho warsidaha adag ee Martech.
iimaylkayagu waa mid ka jawaabaya aaladaha mobilada waana sahlan tahay in la dhex geliyo si loo aqoonsado mawduucyada ganacsigaagu u baahan yahay si uu u guuleysto. Waxaad heli doontaa dhammaan qoraaladii ugu dambeeyay iyo sidoo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee aan ku xayeysiino goobta. Marmarna waxaan ku dari doonaa qaar ka mid ah dalabyada gaarka ah ee macaamiisha kaliya!
Iimayllada ayaa isla markiiba la diraa Wargeysyada toddobaadlaha ah waxay soo baxaan Isniin kasta si aad usbuucaaga ugu bilowdo fikrado cusub!
In ka badan 32,000 iibinta iyo xirfadlayaasha suuqgeynta la soco tiknoolajiyada mahad warsideena!
Hadda isdiiwaangeli oo billow ogaanshaha, baadhista, iyo barashada sida loo geliyo tignoolajiyada suuq-geynta iibka ugu fiican si ay u shaqeyso si aad u kobciso ganacsigaaga!
Waa tan waxa ay macaamiisheena ka yiraahdaan warsidaha:
Dhammaan emayllada aan helo, Martech ZoneWarsidaha waa midka aan aqriyo subax kasta. Douglas wuxuu la wadaagaa waxyaabo aan caadi aheyn oo shaqsiyan iga caawiyay inaan kobciyo ganacsigeyga sanadihii la soo dhaafay - laga bilaabo soo ogaanshaha aaladaha ilaa fahamka sida loo hirgaliyo tikniyoolajiyadda natiijooyinka suuqgeynta ugu wanaagsan, warsidahan waa miino dahab ah!
Aadan Small, Suugada Wakiilada